(ဝီကီပီးဒီးယား:ပေါင်းကူးနေရာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၁ Wikipedia Asian Month 2019
၂ Extension of Wikipedia Asian Month contest
၃ Wiki Loves Folklore
၄ Global bot policy proposal: invitation toaMeta discussion
၅ Wiki Loves Folklore 2021 is back!
၆ Global bot policy changes
၇ Invitation to join the UCoC Roundtable Discussions
၈ Invitation to join the 12 June UCoC Roundtable discussion
၉ Universal Code of Conduct News – Issue 2
၁၀ Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee
၁၁ Delay of the 2021 WMF Board of Trustees election
၁၂ Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review
၁၃ Voting for the 2021 WMF Board of Trustees election is now open
၁၄ အငြင်းပွါးမှုအဖြစ်ဆုံး ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း ဂေါပကအဖွဲ့၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ
၁၅ Movement Charter Drafting Committee - Community Elections to take place October 11 - 24
၁၆ Universal Code of Conduct Draft Enforcement Guidelines review still needs your ideas and opinions
၁၇ Voting period to elect members of the Movement Charter Drafting Committee is now open
၁၈ Universal Code of Conduct News – Issue 4
၁၉ Learn how the Implementation Grants can support your Movement Strategy plans
၂၀ Meet the new Movement Charter Drafting Committee members
၂၁ ESEAP Regional Education Meeting
၂၂ Closing the comment period for the Universal Code of Conduct Enforcement Draft Guidelines
၂၃ Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees elections
၂၄ Wiki Loves Folklore is back!
၂၅ Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open
၂၆ Movement Strategy and Governance News #5
၂၇ Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your stories
၂၈ Additional question to the Call for Feedback about the Board of Trustees elections
၂၉ #WikiForHumanRights Conversation Hour - ESEAP Communities
၃၀ Leadership Development Task Force: Your feedback is appreciated
၃၁ Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Review
၃၁.၁ Upcoming Conversation Hours on 25 February and4March
၃၂ The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed
၃၃ Invitation to Hubs event: Global Conversation on 2022-03-12 at 13:00 UTC
၃၄ Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting open from7to 21 March 2022
၃၅ Leadership Development Working Group: Apply to join! (14 March to 10 April 2022)
၃၆ Join the Community Resilience and Sustainability Conversation Hour with Maggie Dennis
၃၇ Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting is now closed
၃၈ Leadership Development Working Group: Reminder to apply by 10 April 2022
၃၉ Join the Wikimedia Foundation Annual Plan conversations with Maryana Iskander
၄၀ Movement Strategy and Governance News – Issue 6
၄၁ Next steps: Universal Code of Conduct (UCoC) and UCoC Enforcement Guidelines
၄၂ 2022 Board of Trustees Call for Candidates
၄၃ Call for volunteers: 2022 Wikimedia Foundation Board of Trustees election
၄၄ Announcing the members of the Leadership Development Working Group
၄၅ Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines
၄၆ 2022 Board of Trustees Call for Candidates
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၆:၅၇၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
--MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၆၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
sent using MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၆:၁၄၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Martin Urbanec (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၉၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၃:၂၅၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
—Thanks for the fish! talk•contribs ၁၈:၄၈၊ ၆ ဧပြီ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
You are invited to participate in the Roundtable Discussions about how to enforce the Universal Code of Conduct within the Wikimedia movement. There are two Zoom calls scheduled at 15 May and 29 May, both at 15:00-16.30 UTC. Please sign your name here if you are interested. Should you have any questions, please contact RamzyM (WMF). Thank you! MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၂၁:၄၈၊ ၅ မေ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Dear Wikimedians: you are invited to participate in the next Roundtable discussion on the Universal Code of Conduct (UCoC). The next iteration would be held on Saturday, 12 June 2021, on 05.00-06.30 UTC (see your local time here). The forum would discuss how to enforce the Code of Conduct across Wikimedia projects and communities. Should you have any question, please direct it to Ramzy Muliawan. See you there! MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၉:၄၄၊ ၃ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၂၊ ၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy starting from next week here. Please contact strategy2030တမ်းပလိတ်:Atwikimedia.org or Ramzy Muliawan, Movement Strategy and Governance facilitator for the ESEAP region, with questions.
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၀:၄၀၊ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၆:၀၇၊ ၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၄:၅၁၊ ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၁:၁၂၊ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အငြင်းပွါးမှုအဖြစ်ဆုံး ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း ဂေါပကအဖွဲ့၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘုတ်အဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲ၌ ပါဝင်ခဲ့ကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း ဂေါပကအဖွဲ့၏ ဆန္ဒမဲများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဂေါပကအသစ် (၄)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပရောဂျက်ပေါင်း ၂၁၄ ခု မှ လူဦးရေ ၆,၈၇၃ ဦး သည် ၎င်းတို့၏ မှန်ကန်သောဆန္ဒမဲများအား ထည့်ခဲ့ကြပါသည်။ အောက်ပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းလေး ဦး သည် ဆန္ဒမဲထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိခဲ့သည်-
.ဤကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား လူထုဆန္ဒမဲဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့ကိုဂေါပကအဖွဲ့သို့ မခန့်အပ်သေးပါ။ သူတို့သည် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်စစ်ဆေးမှု အောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်၊ နည်းဥပဒေများတွင် ဖော်ပြထားသည့်အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်မီရန်လိုအပ်သေးသည်၊ ဘုတ်အဖွဲ့သည်ယ ယခုလ လကုန်တွင် ဂေါပကအသစ်များ ခန့်အပ်ရန် ကြိုတင်ရက်ချိန်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဒီနေရာတွင် ကြေညာချက် အပြည့်အစုံအား ဖတ်ရန်။
-- RamzyM (WMF) ၂၃:၀၈၊ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
—-- Message Translator of Language 'my'.. Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၀၃:၀၄၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
For the full context of the Movement Charter, its role, as well the process for its creation, please havealook at Meta. You can also contact us at any time on Telegram or via email ([email protected]).
Best regards, RamzyM (WMF) ၀၈:၅၅၊ ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Best regards, RamzyM (WMF) ၀၇:၂၇၊ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
၁၀:၃၅၊ ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၁၈:၂၅၊ ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Best regards, RamzyM (WMF) ၁၀:၂၂၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Best, RamzyM (WMF) ၁၃:၃၉၊ ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Read more about this event here: ESEAP Regional Meeting You may join asasharer by adding your own agenda or send an email to [email protected] to be included in the participants list.
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၇:၅၄၊ ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Best, RamzyM (WMF) ၀၈:၅၇၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) (talk) ၀၄:၄၈၊ ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
--MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၃:၁၅၊ ၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), ကြာသပတေး ၁၄:၅၆, ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)
You may also write to [email protected] or join the Telegram channel.
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၁:၁၈၊ ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်&oldid=745530" မှ ရယူရန်